Mgbe ị na-ede akụkọ banyere ndụ gị, ekwela ka onye ọ bụla ọzọ jide mkpịsị akwụkwọ ahụ. - Harley Davidson - Pedia na-ekwu okwu
Mgbe ị na-ede akụkọ banyere ndụ gị, ekwela ka onye ọ bụla ọzọ jide mkpịsị akwụkwọ ahụ. - Harley Davidson
Ndụ dị oke ọnụ ahịa. Ọ dị mkpa ka anyị jiri ya mee ihe. N’ime ihe gafere, anyị ekwesịghị ichefu ma ọlị ka anyị ghara ịchịkwa ndụ anyị. Ọ dị mkpa ka anyị mata ihe mgbaru ọsọ anyị. Ọ dị mkpa inweta ma meghee njikere ịnwapụta ihe ọhụụ ka anyị nwee ike ịmata n'ụzọ ziri ezi na ịchọrọ nrọ anyị.
A ga-enwe ihe ịma aka n’ụzọ, mana ọ bụ n’anyị icheta na anyị kwesịrị imezu nrọ anyị. Nke a ga-eduga ndụ na-eju afọ ma ọ ga-ahụ na anyị na-ebi ndụ na-amị mkpụrụ.
A ga - enwe ndị dị iche iche ga - emetụta anyị. Mana anyị ekwesịghị ikwe ka mmetụta a gbanwee ka ọ na-enye ha ike iduzi ndụ anyị. I nwere ike iche na onye ahụ bụ onye maara gị nke ọma. O nwekwara ike ịbụ eziokwu. Ma iwepu ndu gi n’eme ka ị mee ihe ot someone u onye ozo gaara eme.
Ga-atụfu onwe gị na ikike gị iji lekọta onwe gị. Become ga- dabere ma nwee mmetụta nke ịfu mgbe ị nọ naanị gị. Yabụ, ọ dị mkpa ịnwe ndị ọzọ dịka mkpali mana nwee njikwa nke onwe anyị.
Mkpịsị odee akụkọ ndụ gị dị n’aka gị ma ị nwere ike inye ya nduzi n’onweghị. Might nwere ike ịmehie, mana obi agaghị ama gị ikpe na ị tụkwasịghị onwe gị obi n'ihi na ị rụrụ ya n'onwe gị. Will ga-amụta ihe site na ya, gaa n'ihu ma chụsoo ihe ịga nke ọma, ha nile dika mmadu nwere onwe ya.
Echiche Ziri Ezi Banyere Ndụ
Otu banyere Ogu Na Ede
Akụkọ Nkọwa Banyere Ndụ